Löfven oo si aqlabiyad leh loogu doortey hogaamiyaha xisbiga S - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Löfven oo si aqlabiyad leh loogu doortey hogaamiyaha xisbiga S
Weligey kama shakin mabaadii'ida xisbiga
La daabacay torsdag 4 april 2013 kl 15.38
Shir-weeynaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga uga socda magaalada Göteborg ayaa Stefan Löfven si rasmi ah loogu doortay jagada hoggaanka xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga. Jagadaasina oo muddo sannad iminka laga joogo loogu doortey si ku-meel-gaar ah.
- Ma u dooran karnaa Stefan Löfven jagada hogaamiyaha xisbiga?
- Waa go’aan la isku raacsan yahay sow maaha?
- Waa go’aan loo mideeysan yahay iyo sacab.
Codeeynta uu shir-weeynuha oo ah hayadda ugu sarreeysa ee go’aammada xisbigu ku ansixiyay in Löfven uu noqdo hogaamiyaha xisbiga ayaa ka dhigeeysa mid si rasmi ah jagadaa loogu doortey, isagoona uu Löfven codeeyntaa ka dib uu sheegey inuu aad ugu farax-san yahay jagada loo magacaabey, isla-markaana uu xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadigu yahay mid dhiigga kaga jira. Ereyadiisiina waxaa ka mid ahaa:
- Waad fahmi kartaan xiisaha uu go’aankiinu u leeyahay wiil yar ee ku soo barbaaray carriga Ådalen. Waxaan qeeyb ka ahaa dhismaha urur dhallin-yaro ee xisbiga waqti la soo dhaafay. Östen Höggman oo daarta ku sugan ayaa ka mid ahaa. Illaa iyo toddobaatameeydii illaa hadda ayaan xubin ka ahaa xisbiga, welina waan ka ahay. Aniga oo la xafladeeyn jiray xisbiga, dhanka kalena la tiiraanyoon jiray kolka ey caqabado la soo gudboonaadaan. Marna ima soo marin inuu shaki iga galo xubin-nimada xisbiga iyo mooqifka aan siyaasad ahaan taagnaa.